Mpempe foto MDF Blank Sublimation
Bespoke artwork ma ọ bụ ihe osise na etiti okpokoro
zuru oke maka agbamakwụkwọ, ụbọchị ọmụmụ, ncheta ọmụmụ na oge ndị ọzọ pụrụ iche!
C reate nka nke gi site na ngwaa onwe ya
Anyị na-enye ọrụ bespoke iji chepụta ma belata MDF etiti dabara na mkpa gị. Sizedị ahaziri iche na ụdị maka ogwe osisi MDF na-enweghị oghere dị, ma e wezụga, anyị na-enwe ike ịme UV ma ọ bụ ikpo ọkụ sublimation nyefee foto gị ozugbo! ROYI ART na-akwado gị iji aka gị mepụta nka nke aka gị!
Akwụkwọ Ozi Nke Eletriki: Maka akwụkwọ ozi ahaziri iche nwere ike ịbụ Lovehụnanya, Ezinaụlọ, Anyanwụ, Enyi, Nkele na ndị ọzọ! Nwere ike ikpebi nha ihu, ụdị na nke etiti. Gosiputa ihe ochicho gi kacha nma site na nke haziri!
Okpokoro na usoro nke isi: can nwere ike ikpebi kedu usoro a, ha nwere ike ịbụ anyanwụ, ọnwa, ifuru, anụmanụ ma ọ bụ ihe ọ bụla n'uche gị! Chepụta ụkpụrụ dabara adaba maka eserese site na mmụọ nke gị!
Ternkpụrụ n’ime etiti ahụ: Ọ bụrụ n’ịchọrọ ụdị ejiji dị mfe n’etinyeghị ya nke ọma na isi nke etiti ahụ, kedu ihe ị ga - eji mee ka ahaziri ahazi n’ime etiti ahụ, naanị gosi anyị ihe ịchọrọ ka etiti ahụ ma anyị ga - enyere gị aka ịtụgharị ya. n'ime eziokwu!
Frame Cartoon: Ọ bụ oge kachasị mma iji nyere ụmụaka aka ịchekwa oge nwata na-agaghị echefu echefu! Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ọmarịcha ụzọ edekọ etu ụmụ gị si eto n’usoro site na nzọụkwụ ma ọ bụ ewu ewu n’etiti ụmụ akwụkwọ praịmarị! Ezigbo ihe osise ekike na-egosi akụkọ site na ọmarịcha ụzọ! Can nwere ike ikpebi akparamagwa kedu iji sonyere nwatakịrị ahụ iji tolitere site na nzọụkwụ!
Anyị Bido Nwepụta Njikere Gị
Anyị na-chepụta ma na -emepụta mkpụrụ osisi MDF blanket na-eji MG na teknụzụ ịcha ọkụ laser CNC. Igwe ọpịpị ekwesịrị ikpo ọkụ bụ 180 ~ 200 ℃ na 60-80 Sekọnd site na nrụgide ọkara. Uru nke ogwe osisi MDF anyị bụ mmiri na-egbochi ma na-enyere aka idowe ogologo ndụ.
Otu esi amalite na anyị? Nzọụkwụ mbụ bụ ịkpọtụrụ anyị ma gwa anyị ihe dị n'uche gị, mgbe ahụ anyị ga-eme ka ọ bụrụ ezigbo nka!
Bipụta foto nke gị dịka onyinye ahaziri iche site na ịkpọtụrụ anyị!
ndina Ogwe , Abstract Oil osise , Oil sere , Aka Oil osise , Mpekere Mpekere Na Kanvas , Contemporary Oil sere , Ngwaahịa niile.